Ikhekhe elitsha leepesika -Iiresiphi zeThermomix | ThermoRecipes
Ikhekhe elitsha lepesika
IdessertImizuzu ye2258 abantuIikhalori ezingama-260
Le khekhe ityiwa ngawo onke amaxesha onyaka, kodwa ipholile kakhulu ukusela ngexesha lasehlotyeni. Ikhekhe elingenazo iziqhamo kunye noshizi omnandi.
Ukwenza ukuba senze isiseko sebhiskithi esiqhekezayo kwaye sibeke itshizi kunye nokuzaliswa kokhilimu. Ukuyigqiba, kongezwe umaleko weepesika nge-gelatin emnandi eneziqhamo ezibini.
Ungayigqiba le dessert kwisikhenkcezisi ukuze iseti ngokugqibeleleyo kwaye ke siyithabathe sibande ngakumbi kwaye siyiqabile. Ngokuqinisekileyo uya kuyithanda imeko yayo yebhisikidi kunye netshizi, kunye neziqhamo ezimnandi ezihamba nazo.
1 Ikhekhe elitsha lepesika
Ikhekhe elimnandi neliswiti elenziwe ngeyona cream ingcono kunye netshizi kunye nocwecwe lwebhisikidi oluqhekezayo. Siza uyihombisa ngolunye uluhlu lwamaqhekeza eepesika kwisiraphu eya kuyenza isempilweni ngakumbi kwaye yendalo.
Ixesha lokulungiselela: 3H 30M
Ixesha lokupheka: 15M
Ixesha elipheleleyo: 3H 45M
I-135 g yeebhiskithi zokugaya ukutya
I-85 g ibhotolo inyibilikile
I-400 g yohlobo lweshizi cream ePhiladelphia
I-400 ml yekrimu yokubetha
5-6 iipesenti zepesika kwisiraphu
175 ml yeepesika
75 ml amanzi
Iipunipo ezi-2 zejeli yesitrobheli
Iipunipo ezi-2 zejeli yelamuni
Sibetha ukhilimu obandayo kwiglasi yeThermomix kunye nebhabhathane. Kule nto sidibanisa i-500 ml yekrimu kunye ne-100 g yeswekile kwaye siyijikeleze Imizuzwana engama-45 kwisantya 3,5. Ixesha lokubethwa libonisa okoko ukhilimu ungadinga ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi. Kule meko, ukuba ufuna ixesha elingaphezulu, siya kuyibetha imizuzwana embalwa ngaphandle kokudlula kongcangcazela. Sithatha ukhilimu kwiglasi kwaye sibeka ecaleni.
Kwiglasi enye ngaphandle kokucoca kunye nebhabhathane, yongeza i-450 ye-cream yetshizi uyibethe Imizuzwana engama-10 kwisantya 2,5. Yongeza ukhilimu otyutyiweyo, ugubungele kancinci ngecephe kwaye udibanise kwakhona Imizuzwana emi-8 kwisantya 2. Sisusa ukhilimu kwiglasi kwaye siyifake kwisitya kwaye siyifake kwifriji.
Sicoceka iglasi kwaye songeza i-135 g yeicookie kwaye sizityumze ngexesha Imizuzwana engama-10 kwisantya 7. Songeza ibhotolo enyibilikiweyo (sinokuyinyibilikisa ngamandla asezantsi kwimicrowave) kwaye uyixube Imizuzwana emi-5 kwisantya 6.
Silungisa ipani yekhekhe malunga ne-18 cm ububanzi, ivaliwe kwaye inokususwa ekubumbeni. Kwimeko yam, ndibeke isiqwenga sephepha elingenawo amafutha kwisiseko ukuze ndikwazi ukuyivula ngokulula ikhekhe. Songeza umqathane otyunyuziweyo kwaye sakha uluhlu oluncinci kakhulu nolugudileyo. Ingashiywa njengoko injalo okanye ifakwe ehovini nge-180 ° imizuzu esi-8.
Sikhupha ipani sayiyeka yaphola. Songeza ushizi wekrimu kwaye siyibeke kwisikhenkcezisi kangangeyure ukuze simkhenkce. Xa sele sele sikulungele siya kulungiselela ukugubungela.
Kwiglasi yethu ecocekileyo sidibanisa i-175 ml yesiraphu, i-75 ml yamanzi, amacephe amabini e-gelatin ye-strawberry kunye neepunipoli ezimbini ze-gelatin yelamuni. Siza kuyitshisa ngenkqubo Imizuzu emi-2 nge-100 ° ngesantya 1. Ngaphambi kokuyongeza kwikhekhe, siyivumela ukuba ipholile.
Sinqunqa ipesika ibe ngamaqhekeza amancinci kwaye siyisasaza sigqume ikeyiki. Yongeza i-gelatin ebandayo kwaye uyibuyisele kwisikhenkcezisi ide ibe iseti. Ukuze ukwazi ukuyiphaka, ungayikhupha kwisikhenkcezisi kangangesiqingatha seyure ngaphambili kwaye uyikhonze.
Fumanisa ezinye iiresiphi ze: ngokubanzi, Postres
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » ngokubanzi » Ikhekhe elitsha lepesika
Iikeyiki ze-asparagus ezimhlophe ze-tuna kunye namhlophe